Vaovao - Fampidirana ny Endriky ny Surge Protector an'ny Surge Protector Surge Protector Performance
Fampidirana ny Surge Curge dia manondro ny onjan'ny tampon'isa na ny tondra-drano be loatra izay lehibe lavitra noho ny rivo-piainana tsy miovaova ateraky ny fotoana hiverenan'ny herinaratra na rehefa tsy ara-dalàna ny faritra. amin'izao fotoana izao rehefa ny famatsiana herinaratra (indrindra fa ny famatsiana herinaratra) vao nirehitra. Satria ny linearity ny fizaran-tany dia mety ho ambony noho ny pulse ny hery famatsiana ny tenany; na noho ny famatsiana herinaratra na faritra hafa ao amin'ny faritra. Ny ampahany amin'ny fitsabahana amin'ny tenany manokana na ny spikes ivelany dia antsoina hoe surge. Mety hahatonga ny faritra ho may amin'ny fotoanan'ny firongatry, toy ny PN junction capacitance fahapotehan'ny, fanoherana nitsoka, sns. famolavolana, tsotra sy mahazatra capacitors amin'ny parallèle sy andian-dahatsoratra inductance no ampiasaina.
Ny fanatontosana ny fisondrotan-jiro amin'ny ankapobeny dia misy ao amin'ny rafitra fitsinjarana herinaratra, izay midika fa misy ny fisondrotana eny rehetra eny. Misy rivotra, compressor, ascenseur, paompy na motera amin'ny fitaovana elektrônika - Ny rafitra fanaraha-maso ny ordinatera dia toa tsy misy antony. amin'ny tsy fahombiazana, famerenana na olana amin'ny voltora
Ny toetran'ny fisondrotana dia fohy dia fohy ny fotoana famokarana fisondrotana, mety amin'ny filaharan'ny picoseconds.Rehefa misy fisondrotana dia mihoatra ny avo roa heny noho ny sanda ara-dalàna ny amplitude ny voltora sy ny ankehitriny. ny tampon'isan'izao tontolo izao dia lehibe lavitra noho ny steady-state input current.Ny famatsiana herinaratra dia tokony hametra ny haavon'ny firongatry ny AC switch, rectifier bridges, fuses, ary ny singa sivana EMI. ny famatsiana herinaratra na mahatonga ny fuse hitsoka.
Fotoana fandefasana: Nov-20-2021